‘कमेडी च्याम्पियन-२’ प्रशारण सुरू, फेरी हाँस्ला त नेपाल ? « Rara Pati
‘कमेडी च्याम्पियन-२’ प्रशारण सुरू, फेरी हाँस्ला त नेपाल ?
प्रकाशित मिति : २१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार
२१ फागुन, काठमाडौं । गत वर्षदेखि नेपालमै पहिलो पटक उत्पादन गरिएको कमेडि रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन सिजन–२’ को प्रशारण सुरू भएको छ । आज शुक्रबार बेलुकी ९ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनबाट कमेडी च्याम्पियन प्रशारण गरिएको हो ।
भोली शनिबार बेलुकी ९ बजे पनि प्रशारण हुने हास्य रियालीटी शो हप्तामा दुई पटक (शुक्रबार र शनिबार) प्रशारण हुनेछ ।
डिजिटल अडिशनमार्फत् हजारौँबाट छानिएका १८० जनाले चार वटामा श्रृङ्खलामा फिजिकल अडिशन दिनेछन् । चारवटै श्रृङ्खलामा प्रस्तुती दिने सहभागिहरूबाट निर्णायकले २४ जनालाई छनोट गर्नेछन् । आजको प्रशारित एपिशोडमा उत्कृष्ट प्रस्तुती दिएर भारतको सिक्कीमका बिक्कि अग्रवालले ‘गोल्डेन कि’ प्राप्त गरेका छन् । आयोजकले गोल्डेन कि प्राप्त गर्नेलाई सिधै उत्कृष्ट २४ मा प्रवेश गर्ने नयाँ अवसर सिर्जना गरिएको छ ।
चैत ६ गते उक्त हाँस्य प्रतिस्पर्धाको ग्राण्ड ओपनिङ हुने कमेडि च्याम्पिएनका दृश्य सम्पादक अनिल सम्राटले रारापाटीलाई जानकारी दिए ।
गत बर्षबाट सुरु भएको रियालिटी प्रतिस्प्रधाले दर्शकको अत्याधिक माया पाएर पहिलो प्रयासमै ठुलो सफलता हात पारेको थियो । यसैले पनि यसबर्ष दर्शकको मायालाई बचाइराख्न निकै मिहिनेत गरिएको निर्देशक विशाल भण्डारी बताउँछन् ।
गत वर्षको सिजनमा निर्माणपक्षले अडिसन राउन्ड प्रशारण गरेको थिएन । तर, दर्शकले शोलाई अत्याधिक मन पराएपछि यसपटकदेखि अडिसन पनि प्रशारण गर्न लागिएको विशालले बताए ।
थ्रि प्रोडक्शनले यो शोको निर्माण गरेको हो । शोमा गत वर्षकै निर्णयकहरू सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, ऋचा शर्मा र प्रदिप भट्टराई दोहोरिएका छन् । यसपटक रिमा विश्कर्माकर्मासँगै अघिल्लो सिजनका एक उत्कृष्ट प्रतिस्प्रधि मेक्सम गौडेल पनि प्रस्तोताका रूपमा देखिएका छन् ।
पहिलो एपिशोड हेर्नुहोस् :
८ साउन, सुर्खेत । कलाकार रेशम वलीले ‘जमिनै थरर’को सफलतापछि अर्को मौलिक तिज गितको कोसेली
६ विवाह मण्डपबाट भागेकी कटरीना
मुम्बई(आजतक) । अभिनेत्री कटरीना कैफ बलिउडको ठूलो नाम हो । सन् २००३ मा बलिउडमा डेब्यू
बिहे भएन भने पनि बच्चा चाहिँ जन्माउँछु : नम्रता सापकोटा
अभिनेत्री नम्रता सापकोटाले आफूलाई बिहे नगरीकनै बच्चा जन्माउने चाहना रहेको बताएकी छन् । अबको तीन-चार
वर्षा भन्छिन्, ‘आजसम्म कसैसँग प्रेम भएन’
काठमाडौं । राजनीतिज्ञ र कलाकारको बोली छेपारोले रंग फेरेझैँ बदलिरहन्छ । उनीहरु आज बोलेको कुरा
टेलिभिजनको पर्दाकी लोकप्रिय कलाकार सुरेखाको निधन
मुम्बई । राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता सुरेखा सिक्रीको निधन भएको छ । ७५ वर्षको उमेरमा ह्रदयघातका
हुम्लाका युवाले निर्माण गरे गोठालाको कथामा आधारित म्युजिक भिडियो
२९ असार, हुम्ला । दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लाका युवाहरूले गोठालाको कथामा आधारित म्युजिक भिडियो निर्माण
सैनिक जवानलाई कुटपिट गर्ने ३ क्याप्टेनको बढुवा रोक्का,
१ मीटरको फलामको रडले ढाड छेडिएका बालकको सफल
कोरोना सङ्क्रमणबाट सांसद सानु शिवा पहाडीको निधन
नाङ्गो खुकुरी देखाएर मलेसियामा नेपाली लुट्ने गुण्डा ‘डेभिड’
नाथममा आमुल परिवर्तन ल्याउँदै कार्यकारी निर्देशक दिपक थापा
कोरोना सङ्क्रमणबाट चित्रबहादुर के.सी.को अवस्था गम्भीर